Fikolokoloana sy fanavaozana ny forum | Avy amin'ny Linux
Fikolokoloana sy fanavaozana ny forum
Androany dia nikasa ny hanao fikojakojana sy fanavaozana ny Forum-ko aho, noho izany dia mety hiteraka olana izany na hiatrika karazana fahalavoana.
Ny antony lehibe mahatonga an'io fikojakojana io dia ny fanavaozana ny kinova azo antoka ankehitriny (1.5.X), ary koa ny fanitsiana ny lohahevitra sy ny fandikana azy. Miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana mety haterak'izany.
Hitan'izy ireo ny fiovana sy ny ToDo ao Ity rohy ity
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fikolokoloana sy fanavaozana ny forum
Etsy ankilany, nametraka wordpress 3.3.2 ianao ary namoaka 3.5.1 dia nivoaka. Ahoana no tsy hanavaozanao ny kinova farany miorina?
Eny, misy plugins sy singa maromaro ampiasainay amin'ny bilaogy izay tsy mifanaraka tanteraka amin'ny kinovan'ny WP farany.
Rehefa manao ny fanovana amin'ny lohahevitra manaraka izahay dia hanavao.
Misaotra ny fanamarihana elav.
Misaotra anao tamin'ny fanamarihana elav, ary arahaba soa ao amin'ny bilaogy, azonao atao ny milaza fa notapahinao be dia be izany.
Araraotiko ity fotoana ity hanambarana bilaogy fandaharana Python, rindrambaiko maimaimpoana io ka mifandraika amin'ny FromLinux 🙂
Voavela! Tsara hatrany ny fanovana ary ny fitazonana ny rafitra havaozina dia soso-kevitra hatrany.!
Tsara! .. ..Miezaka ny hanao ny bitiko aho .. 😛
Na inona na inona..hifandray amiko .. 😉
Vonona!! Mieritreritra aho fa vita amin'ny FORUM 😀
Satria manavao ireo sary masina Chrome sy Chromium izahay amin'ny fanehoan-kevitra izay toa ratsy tarehy ireo taloha 🙂
Fanohanana ny PS Testing Arora.
Ah fa misy kisary vaovao ve? O_O ... omeo ahy ny rohy an'ny svg an'ireo vaovao ary hanova azy ireo amin'ny fahafinaretana aho 🙂
Vaovao Heveriko fa tsy miresaka momba ny drafitra akory izy ireo, jereo ilay chrome, ilay chromium tokony homeko anao xD
Tonga lafatra, mitady ilay Chromium aho ary mila manamboatra ny fanovana rahampitso.
Tsy haiko raha noho ny fikojakojana azy io, fa efa nanandrana niditra tao amin'ny forum nandritra ny andro vitsivitsy aho (hatramin'ny nisoratra anarana nandritra ny herintaona) ary na dia misy tenimiafina vonjimaika aza dia tsy afaka miditra. fofona .. !! Tokony hisoratra anarana amin'ny mailaka hafa ve aho?
Mampiasa an'ity mpampiasa ity ve ianao? Mba hametrahana tenimiafina rehetra dia alefako any amin'ny mail ary avy eo dia ovainareo.
Ity no nidiran'i elav ho nosferatuxx, misaotra.
Forum mahafinaritra tokoa, toa hitako nitombo io.
WPS Office Beta ho an'ny LINUX.
Hatraiza no mety fiantraikan'i Mir amintsika?